1. Halkee waa meesha aad?
Waxaan nahay ee magaalada Shenzhen, Gobolka Canton, Shiinaha.
2, Waa maxay sheyga?
3.How si aad u dalbato mashiinada?
1). Weyddiistay oraah xirfadeed iyo isgaarsiinta bukaanka.
2). Xaqiiji qiimaha, Tine hogaanka, muunad, muddada lacagta iwm si ay u dhamaystiraan amarada.
3). Sales idiin soo diro biilka proforma ee seal Shirkadda.
4). Customer diyaarin deposit oo noo soo diri rasiidka bangiga.
5). wax soo saarka bilowga ah la diyaarin doonaamarka la eego waqtiga hogaanka, aan in markii ugu horeysay warrami macaamiisha haddii ay jiraan arrimo aan la hubin dhici doona, qabsato waqtiga hogaanka cusub.
6). Production End waxaan sawiro ka idiin soo diri doonaa si loo ansixiyo, waxaan kuu diyaarin doonaa shixnad ka dib markii oggolaansho waxa kale oo aad diyaarin kartaa kormeerka xisbiga saddexaad hor shixnad.
7). Macaamiisha diyaarin dheelitirka iyo iibka our markab doonaan alaabta. Wargeli tirada raadraaca iyo hubiso xaaladda isdhex macaamiisha ama B / L asalka ah, waayo, badda-shixnaddii.
8). 0rder la dhihi karaa "dhameysato" marka aad hesho alaabta iyo ka dhergin iyaga iyo adeegga leh.
9). Jawaab-celinta si Lanlin ku saabsan tayada iyo adeegga, warcelin suuqa & soo jeedin, waxaan u samayn karaa fiican.
10). Lanlin bixin doonaa adeeg-iib aheyn ka dib markii aad u baahan tahay.
Sida soo saaraha ah iyo ganacsade, Our bartilmaameed waa in ay noqdaan badeeco fiican iyo qofka makiinado lacagta lagu daabaco.
4.What waxaa loo baahan yahay macluumaadka ka dhanka macaamiisha soo xigasho?
Fadlan noo soo sheeg hoos macluumaadka:
The aragti iyo waxyaabaha aad alaabta?
Sidee badan oo midabyo aad daabacdo?
Ma leedahay stop diiwaanka at buttom dhalada?
Waa maxay xawaaraha daabacaadda aad rabto in aad ka?
Mashiinka automatic Full ama mashiinka si toos ah semi?
La wadaag image daabacaadda ama shuruud daabacaadda for our tixraaca.
5.Can kuu soo diri liiska qiimaha?
Fadlan email u soo diri info@lanlinprintech.com,noo sheeg shuruudaha aad.
6.Can ku siin mashiinada kaabayaal ah, sida mishiinka pre-daabacaadda, mishiinka daabacaadda post?
Haa, Fadlan email u soo diri info@lanlinprintech.com,noo sheeg shuruudaha aad.
7.Can mashiinka caadadii aad?
waa 8. Waa maxay tirada ugu yar ee ka mid ah amar?
9.What waa habka bixinta?
TT, LC, ururka reer galbeedka
10. Waa maxay sida baakadka?
11. Waa maxay sababta LED Daaweynta ilayska?
Haddaba waxaa u janjeera in LED Daaweynta laambad UV waxaa sida caadiga ah ay qaateen shirkadaha daabaco. Maxaa yeelay,
1) Awoodda aad uga yar iyo qiimaha waa raqiis ah oo aan ahayn laambad mercury UV caadiga ah, in badbaadiyay lacag. Power of laambad LED ku saabsan 400 w yahay, halka xoogga laambad mercury waa 1.8-5 kw.
2) noolaa wuxuu laambadda LED waa waqti aad u dheer ilaa 8000 saacadood, laambad noolaa mercury waa 800 saacadood. laambad Mercury waa consumable ah.
3) Ultraviolet laambad mercury waxyeello u maqaarka, laakiin LED laambad aan harmness mercury maqaarka.
4) laambad mercury UV Caadiga ah u baahan yahay dhowr daqiiqo pre-kulaylinta, laakiin LED uma baahna. Haddii xoogga korontada OFF iyo ON si lama filaan ah uu yahay, waxa ay halis u tahay UV laambad mercury iyo in la yareeyo ay noolaa. Iyadoo LED laambad ayaa harmness lahayn. Sidaas laambad LED waa doorashada ugu fiican.
5) aragti yar, rakibidda fudud oo qalliin, kharashka dayactirka yar yahay.
12.What ku saabsan adeegga farsamada?
Free tasho, muunad free, sawir design free.
• Inta lagu guda jiro fulinta heshiiska:
Booqo warshad, baadho alaabada, tababarka free.
• Ka dib-sale adeegga:
Rakibaadda, debugging iyo tababar lacag la'aan ah;
Guarantee waa hal sano tiriyaa laga bilaabo taariikhda la helo alaabtii. Inta lagu guda jiro damaanad, dayactirka, hagaajinta iyo bedelo qaybo ka mid ah ka gees ah cilladaha alaabta lacag la'aan ah. Iyo bixinta masruufka nolosha mashiinka oo dhan.
rakibaadda Free, tababar lacag la'aan ah, iyo dayactirka noolaa; iibsadaha ayaa bixisa ee tigidhada wareegsan, hotel, iyo cunto our injineer;
13. Waa maxay habka afarta midab ama model CMYK midabka?
habka Afar-color waa marka farshaxanka la abuuray, ka dibna kala afar midabo (CMYK) kaas oo isu geeyo si ay u abuuraan spectrum buuxda ee midabada loo baahan yahay daabacayaa sawiro. Taas macnaheedu waxa weeye tiro badan oo midabo la Yururb karaa iyadoo la isticmaalayo kaliya 4 screens, oo kharashkooda la dhimi, waqtiga, iyo dhigay-up. Daac waxaa looga baahan yahay inay dhexgalaan oo way ka sii translucent, taasoo la micno ah tanaasul la nashaadka midabka.